अर्थतन्त्र Archives - Page4of 36 - Vishwa News
न्युयोर्क कोरोना महामारी पछि थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधारको दिशातर्फ बढेको शुक्रबार शुभ संकेत देखिएको छ । अघिल्लो महिना १४ दशमलब ७ प्रतिशतमा पुगेको बेरोजगारी दर शुक्रबार २५ लाख रोजगारी सिर्जना भएको रिपोर्टसँगै १३ दशमलब ३ प्रतिशतमा झरेको छ । अप्रिलमा
लकडाउनको विषयमा सरकार आफै अलमलमा
काठमाडौं । निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको तहबाट लकडाउनको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको संक्रमणले दिनानुदिन उचाई छोइरहेको छ । यस अवस्थामा सरकारले घोषित लकडाउनलाई कडाई गर्ने वा खुकुलो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन नसक्दा अलमल बढेको छ
यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । २५ जेठबाट उच्च हिमाली भेगका नागरिकलाई यार्सागुम्बा संकलनको अनुमति दिने निर्णय गर्दै यसका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको
लकडाउन उल्लंघन गर्ने काठमाडौंका व्यवसायीको निर्णय, ११ बजेसम्म पसल खोल्ने
काठमाडौं । काठमाडौंमा व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघनको तयारी गरेका छन् । सरकारले लकडाउन मात्र गरेको तर अन्य विकल्पमा तत्परता नदेखाएको भन्दै काठमाडौंमा व्यवसायीहरुले बिहीबारबाट बिहान ११ बजेसम्म पसल तथा व्यवसाय संचालनको निर्णय गरेका हुन् । अहिले बिहान ९ बजेसम्म प्रशासनले पसल
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारका तीन वटै तहबाट यो रकम खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा ९
चौतर्फी विरोधपछि सरकारले थप्यो कर तिर्ने समय
काठमाडौं । सरकारले कर तिर्ने समय थप दुई सातालाई बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले बुधबार नयाँ सूचना निकालेर कर तिर्ने समय बढाएको हो । सरकारले मंलगबार जेठ २५ गेतिभित्रै कर तिर्न ताकेता गरेपछि
काठमाडौं । सोमबार राती जुवाको खालबाट पक्राउ परेका व्यवसायी–व्यापारीलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गले पक्राउ परेका ८ जना व्यवसायीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको हो । मुलुकी अपराध संहिताको जुवा सम्बन्धी
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार विस्तृतमा »
नेपालमा ८ लाख ग्राहकले निःशूल्क विद्युत सेवा पाउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मासिक १० यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तो सुविधा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करीव ८ लाख घरेलु ग्राहकले पाउने भएका छन् । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार विस्तृतमा »
लकडाउन ३२ जेठसम्म लम्बियो
काठमाडौं । नेपालमा सरकारले लकडाउनको अवधि थप १२ दिन लम्ब्याएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई ३२ जेठसम्म लम्ब्याउने निर्णय भएको संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार विस्तृतमा »
बजेटमा एमसीसी परेपछि नेकपामा चुलियो विवाद, निर्णयको अधिकार संसदलाई
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७, ७८ को बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम परेपछि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद बढेको छ । सोही विषयलाई लिएर शनिबार सचिवालय बैठक बसेकोछ । बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदबाटै निर्णय गर्ने सहमति जुटाएको छ
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा केन्द्र सरकार मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने अनुदान अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो वेबसाइटमार्फत केन्द्र सरकारले आगामी वर्ष समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेश
काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा भारी वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा थप १० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढेको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत आगामी आबका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार विस्तृतमा »
१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको लागि उक्त परिमाणको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्।
अफ्रिकी रैथाने सलह नेपाल छिर्ने सम्भावना, कृषि बालीमा उच्च जोखिम
काठमाडौं । अफ्रिकाको रैथाने सलह प्रजातीको विनासकारी किरा नेपाल आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अफ्रिकामा उत्पत्ती भएको यो किरा इरान, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालतर्फ आउने सम्भावना छ । फट्याङ्ग्रा प्रजातिमा पर्ने यो किरा